यस कारण महिनाबारीमा हुन सक्छ ढिलाई – Sajha Bichar
यस कारण महिनाबारीमा हुन सक्छ ढिलाई
By Sajha Bichar	 On Sep 27, 2020 0
महिनावारीमा महिलाहरुले विभिन्न किसिमको समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनियमित महिनावारी महिलाहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन्छ । यदि महिनावारी समयमा भएन भने महिलाहरुलाई आफू गर्भवती भएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । महिनावारीमा गडबढ भयो भने मानिसहरु यसलाई गर्भाधारण भएको हो कि भन्ने सोच्नु सामान्य कुरा नै भैसकेको छ । महिनावारीको बारेमा पूर्ण जानकारी नहुनुको कारण मानिसहरुले यस्तो सोच्ने गर्छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण र अनुभवहरु: डा. विष्णु विलास अधिकारी
रामपुर कृषि क्याम्पस खैरहनीमा ने.वि. संघले गर्यो अनिश्चितकालीन तालाबन्दी